Amandla omoya ngo-2017 nezibikezelo zango-2018 | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Ngonyaka odlule, amandla omoya ngo-2017 abe ngowesibili umphakeli wohlelo lwamandla ezwe lethu. I-23 GW yamandla omoya ikhiqize ngaphezu kwe-47 TWh, ebimele cishe i-20% kagesi ophelele osetshenzisiwe.
Amandla omoya abelokhu ekhona uziphathe kahle, ukuhlinzeka cishe ugesi ofana nowe-2016.
1 Amandla omoya
1.1 Umoya we-Offshore
2 Indali evuselelekayo
3 Ukuguqulwa kwamandla
4 Izinselelo zekusasa
Njengamanje, kunezinjini zomoya ezingaphezu kuka-20.000 1.000 ezifakiwe eSpain, ezisatshalaliswa emapulazini omoya angaphezu kwayi-XNUMX XNUMX. Ngokwengxenye enkulu, babe ne- isimilo kuhle kakhulu ezinsukwini ezibalulekile zokufunwa okuphezulu.
Ngokusho kweRed Eléctrica Española (REE), irekhodi lokukhiqizwa kwamandla omoya lenzeka ngoDisemba 27, 2017, ngokukhiqizwa kwe-330 GWh, okuyiyona ubuchwepheshe bokuqala ekuxubeni kwesizukulwane, ngokufunwa kukagesi okungu-47%.
Eqinisweni, uDisemba 2017 ugcine ukuba yinyanga kaDisemba nge isizukulwane esengeziwe amandla omoya omlando.
Ngaphandle kwalo mnikelo wamandla omoya ngoDisemba odlule, inani lentengo emakethe kagesi belingafika ku- € 20 / MWh ngaphezulu, ngakho-ke ukwanda ekwakhiweni komoya kusho ukonga okungama-30-35% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule (Cishe ngama- € 400 wezigidi)
Kukhona nezimboni ezingama-210 ezisabalele kulo lonke izwe laseSpain, okubeka iSpain njengomkhiqizi wesine ngobukhulu emhlabeni. Ngeshwa ngenxa yezinqumo ze- Iphathi Ethandwayo, lezi zikhungo zinikele wonke umsebenzi wazo ukuwuthumela kwamanye amazwe.
Kusukela ngonyaka odlule, imboni yomoya waseSpain ibilokhu ithuthuka ezimakethe zomoya ezingasolwandle. Kusuka Engxenyeni Yezobuchwepheshe Yomkhakha Wamandla Womoya waseSpain, i-REOLTEC, ucwaningo, ezentuthuko nezenzo ezintsha sezihlanganisiwe futhi zadidiyelwa eziphendula izidingo womkhakha womoya waseSpain. Ngo-2017, ukusebenzisana ku-R & D & i phakathi kwemikhakha yomphakathi neyebhizinisi kukhuphukile emakethe yokuncintisana kakhulu, okwenza kube lula isikhundla sayo emandleni omoya wasolwandle embonini yomoya waseSpain.
Ukuhambisana nemiyalo yase-Europe, uhulumeni wenze izindali ezi-3 ezinkulu ezivuselelekayo, ezimbili ngo-2017 kanye no-2016. ifakiwe.
Ukuhlangabezana nenselelo yokuhlela ukushintshwa kwamandla, I-AEE ulungiselele ukuhlaziywa okuqoqa isimo somkhakha maqondana nokwakhiwa koMthetho Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu Namandla Okuguqula Amandla.
Njengomphumela wokuhlaziywa kwe I-AEE, amandla omoya afakwe ku-2020 azofinyelela ku-28.000 MW (kucatshangelwa izindali ezintsha esezivele zinikiwe kanye ne-quota yomoya waseCanarian), ukuze amandla omoya azokhuphuka nge-1.700 MW ngonyaka ngokwesilinganiso phakathi kokuphela kuka-2017 nasekuqaleni kuka 2020.
Eminyakeni eyishumi elandelayo izokhuphuka nge-1.200 MW ngonyaka kuze kube ngu-2030, ukufinyelela i-40 GW yamandla afakiwe.
Ngenxa yalezi zomoya ezintsha ezivela ocwaningweni lwe I-AEE, ukukhishwa komkhakha kagesi waseSpain kuzokwehliswa ngama-2020% ngonyaka we-30 uma kuqhathaniswa no-2005 (unyaka wokubhekisela wohlelo lokuhweba lokukhishwa kwe-European emissions, i-ETS ngesifinyezo sayo ngesiNgisi) nangaphezulu kuka-40% ngo-2030.
Ngokusho kwe- I-PREPA, I-decarbonisation eyi-100% izotholakala ngonyaka ka-2040. Ngaphezu kwalokho, ukuxubana kukagesi waseSpain kungafinyelela ku-40% kwezidingo ezivuselelwa ngo-2020, 62% ngo-2030, 92% ngo-2040 no-100% ngo-2050.
A ukuhlanganiswa kagesi olinganiselayo.
Ukudidiyela imizimba ehlukene enekhono loku Izinga le-Nacional namandla okuzimela.
Thola ibhalansi phakathi kokunciphisa izindleko zikagesi kanye nokutshalwa kwemali okuzayo. Izindlela kuzodingeka zitholakale ukuze isimo kube esimemenjengezinkontileka zesikhathi eside zamazwe amabili noma uthango lwamanani.
Sungula uhlaka lokulawula oluzinzile oluvumela ukuheha izimali kudingekile.
Endabeni yeziqhingi zaseCanarian, kubalulekile ukugembula kumandla omoya ukwehlisa izindleko zokukhiqiza eziqhingini (okwamanje izindleko ngaphezu kokuphindwe kabili kunasenhlonhlweni, ngenxa yokuncika kwizibaseli).
Izinhloso eziyinhloko zocwaningo zihlose ukunciphisa izindleko nokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo, ukuhlanganiswa kwenethiwekhi ezimeni ezilungile zokuphepha nokwethembeka, nokwenza ngcono inqubo yokukhiqiza. Konke lokhu kufanele kube okuyisisekelo ukugcina iSpain njengomholi kwezobuchwepheshe basolwandle nokusungula izimo ezidingekayo zokuqalisa amandla omoya asolwandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla omoya ngo-2017 nezibikezelo zango-2018
Baphenya imbangela yengozi yetanki likawoyela lakwaSanchi